StayFocusd, fampiharana tena ilaina miasa tsara kokoa | Famoronana an-tserasera
Ny zavatra ataon'ny StayFocusd dia mametra ny fotoana laninao amin'ny tranokala sasany. Azonao atao ny manefy ireo pejy mandany fotoana (tambajotra sosialy, mailaka, gazety ...) ary safidio ny fotoana farany azonao andanianao azy ireo. Amin'izany fomba izany dia hialanao ny fidirana amin'ny Internet ary mora kokoa ny mifantoka amin'ny tena asanao.
Azo alaina ao amin'ny Google Chrome, ampiasain'ny mpampiasa mihoatra ny 460.000. Ity fampiharana ity dia miasa toy izao manaraka izao: ny lahasa izay hamboarinao dia hizara ho dingana maromaro na subtasks izay raha tsy izany dia haharitra 25 minitra. Amin'ny faran'ny isaky ny subtaoty 25 minitra dia manome anao fiatoana kely 5 minitra ny fampiharana. Izy io dia fantatra amin'ny hoe teknikan'i Pomodoro, ary ny zavatra ataony dia ny mampifantoka ny sainao rehetra amin'ny asanao ary, ny tena zava-dehibe dia vitanao akory ny mamita ny asa alohan'ny fotoana kasaina.
Mora ny manangana an'ity rindranasa ity. Vantany vao tafapetraka ao amin'ny Chrome izahay dia tsindrio ny kisary izay tokony hiseho ao amin'ny tranokalanay. Na dia amin'ny teny Anglisy aza izy, dia mazoto be ny fampiasana azy. Andao ho any fanahafana (teny amin'ny teny espaniola ihany) ary avy eo dia ho hitantsika, amin'ny takelaka iray, izay mahaliana antsika. Ao amin'ny tsanganana ankavia izay rehetra azontsika ampifanarahana:
Avela ny fotoana farany - Fotoana farany azo avela isaky ny tranokala voasakana.
Andro mavitrika - Andro hampavitrika ny fampiharana.
Ora miasa - Ora izay hampavitrika azy.
Fotoana famerenana isan'andro - Ora izay hamerenana ny kaontera ho 0.
Toerana voasakana - Tranonkala voasakana.
Toerana avela - tranokala ahazoana alàlana.
Ny safidy nokleary - ny safidy nokleary.
Mitaky fanamby - Tena mpamitaka izahay, izany no antony isian'ity safidy ity. Mety te hanova ny fanaingoana izahay mba hahamora ny fotoana, ary mba hisorohana an'io dia ny fanamby sarotra (fa tsy azo atao, araka ny lazain'ny fampiharana anay) azonao atao ny mivezivezy.
Ataovy miavaka - Personalization. Manapaha hevitra eto fa ny doka tianao hasehoko anao (na tsia). Ohatra, ny hany safidy hofongorako dia "Fanamarihana fanavaozana ny StayFocused”(Vaovao momba ny fanavaozana ny fampiharana).
Fikirana fanafarana / fanondranana - Raha manafatra na manondrana ny angon-drakitra fangatahanao, hahazoana antoka fa tsy hahavery azy ianao.
1 Fametrahana StayFocusd ao amin'ny Google Chrome
2 Fametrahana StayFocusd
Fametrahana StayFocusd ao amin'ny Google Chrome
Ampidiro fotsiny ny katalaogin'ny fampiharana Chrome ary karohy StayFocusd ao amin'ny sokajy Productivity. Raha vao hita dia tsindrio ny anarana ary boaty fifampiresahana dia hiseho miaraka amin'ireo sokajy Famaritana ankapobeny, tsipiriany, sns. Eo an-tampon'io boaty io dia hahita bokotra manga iray manao hoe "Ampio amin'ny Google Chrome”. Tsindrio eo ... ary voila! Efa napetrakao ny rindranasa. Azonao atao ny manidy sy manokatra ny tranokala na miandry minitra vitsy fotsiny hisehoan'ny kisary ao amin'ny bara fitetezana (maso-maso).
Andao hamboarina tsikelikely ny fampiharana. Tsindrio ny kisary fampiharana ary avy eo, ao anatin'io bubble kabary kely io, handeha isika fanahafana.
En Max Time avela Hanapa-kevitra izahay ny minitra avelantsika hitsidika ireo tranonkala izay hosakananay. Izany hoe, ny fotoana lanintsika any amin'ireo toerana tsy tiantsika hahatongavana satria fantatsika fa mandany fotoana fotsiny isika. Amin'ny ankapobeny dia manana 10 minitra isika. Nanapa-kevitra ny hampidina azy ireo hatramin'ny 2 minitra aho: raha mandrara ireo tranonkala ireo aho, dia ho zavatra iray izany. Aza?.
Andro miasa. Raha tonga amin'ny andro fiasana isika dia ny asabotsy ihany no hamafana (Asabotsy) sy ny alahady (Alahady).
Hetsika Active. Manohy amin'ny andro fiasana izahay. Eto dia miankina amin'ny safidin'ny fotoana an'ny tsirairay. Raha ny amiko dia manomboka amin'ny 8:30 maraina ka hatramin'ny 17:30 hariva izy io. Eny, mijery 9 ora ianao ... Fa raha ny tena izy dia mijanona adiny iray hisakafoanana aho, ka ny tena marina dia 8 ora izany.
Fotoana famerenana isan'andro. Heveriko fa safidy roa ambin'ny folo alina amin'ny alina: 12:00 PM.
Tranonkala voafatotra. Andeha hojerentsika ny olana. Ny tena mahatonga ahy tsy hamokatra dia ny tambajotra sosialy, araka ny eritreritro fa hitranga amin'ny maro. Ka nanapa-kevitra ny hampiditra ao amin'ireo pejiko "lisitra mainty" toa ny Facebook, Twitter, Pinterest ary ny gazety notsidihiko indrindra aho. Izany, raha mila Internet amin'ny asanao ianao. Raha hamolavola ianao, ny fepetra henjana (ary azo antoka, tena mandaitra) dia ny fanakanana ireo tranonkala REHETRA. Ho hitantsika eo ny fomba fanaovana azy.
Toerana nomena. Ireo tranokala izay tokony hidirantsika eny na eny. Raha amiko, mailaka.
Safidy nokleary. Tadidinao izay nolazaiko taloha momba ny fanakanana ireo tranonkala rehetra? Ity no safidy. Azontsika atao ny manakana ireo tranokala rehetra, ireo izay efa nasiantsika marika ihany no azontsika avela Toerana nomena na sakano fotsiny ireo ao anaty lisitra Tranonkala voafatotra. Fa tsy izany ihany: afaka manohy manapa-kevitra izay tiana sakanana isika; tranonkala iray manontolo (ny tranokala manontolo) na karazana atiny iray fotsiny (karazana atiny sasany fotsiny), ny fotoana ary na dia ny fandaharam-potoana rehefa tiantsika hanomboka ity fikirakirana ity (izao dia izao-izao, rehefa navela ny fotoana keliko farany-Raha lany ny fotoana avelako farany ambony indrindra, amin'ny fotoana manokana-amin'ny fotoana manokana).
Farany, atsipiko ny safidin'ny fanamby (tsy izao, misaotra) ary ny fikirakirako farany dia mifantoka amin'ilay faritra Ataovy miavaka, mampandeha ny vaovao momba ny fanavaozana ny app. Hendry !.
Mahaliana ny manamarika fa raha tsy ampiasaina ny Google Chrome, dia azontsika atao ihany koa ny misintona azy io amin'ny solosaintsika amin'ny alàlan'ny fitsidihan'ny bytesignals.com/stayfocused.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » StayFocusd, fampiharana tena ilaina hiasa tsara kokoa